I-COVID 19 ithuba lezinkampani ezinkulu ze-telecom tech ukuthola ezinkulu kakhulu-i-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co, LTD
ISIKHATHI: 2020-05-26 HITS: 14
EWashington: Ubhubhane lweCoronavirus lungaba yisisekelo ezinkampanini ezinkulu zezobuchwepheshe zamabhizinisi, ngokusho kwabahlaziyi bezimboni, kulindeleke ukuthi zihambe ziyothenga amafemu amancane wezobuchwepheshe.
Imakethe elukhuni ngemuva kobhubhane lwe-coronavirus ishiye izinketho ezimbalwa ezinkampanini ezincane ezihluthulelwe imali, kusho iWall Street Journal ibika abahlaziyi bezimboni.
Yize iCoronavirus iyinhlekelele enkulu, futhi futhi kuyinselelo enkulu. Ngenkathi izinkampani eziningi zibhekene nengozi yokuvuselela kabusha, ezinye zithole amathuba amabhizinisi amasha phakathi nale nkinga, zaqhubeka nokuthuthuka futhi zathola indlela yazo.
Ungbo Joiwo Explosionproof, a professional telecom-based company with over 15 years of experience spearheading the industrial telephone and system, announced the release of an explosion/weatherproof proof industrial telephone ukuhlinzeka ukuxhumana okuphephile nokuthembekile kwezindawo eziyingozi zangaphakathi nangaphandle. Le minyaka, inani elikhulu lemikhiqizo emisha ethuthukiswa imakethe, yasikhuthaza ukuncintisana okuqinile nokuqhathanisa nenye inkampani.
I-Mob / whatsapp / wechat: +8613858200389
Ukwethulwa kwe-Joiwo mini size campus & ijele & isiboshwa netilongo lomphakathi lasejele i-JWAT145